By Reuters - 10 September 2019 - 10:30
Children walk past a street mural of former Zimbabwe president Robert Mugabe in Harare. / Tafadzwa Ufumeli/ Getty Images
A plane has left Zimbabwe for Singapore carrying government officials and relatives to bring home the body of Robert Mugabe, but it was still not clear where the former leader would be buried.
Leo Mugabe, the late president's nephew and family spokesperson, yesterday said a charter plane left Harare for Singapore just after 9am yesterday.
Mugabe's body was expected to arrive in Zimbabwe on Wednesday at 3pm, Leo Mugabe said.
But when pressed on where Mugabe would be buried, he was noncommittal.
If Mugabe is buried in Kutama village, 85km west of Harare, it would be a major rebuke for his successor, President Emmerson Mnangagwa, and the ruling Zanu-PF party he helped to found.